China Sodium Perchlorate orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | YANXA
No. RTECS .:
UN No. .:
Ny perchlorate sôdiôma dia fitambarana tsy mitambatra miaraka amin'ny raika simika NaClO₄. Izy io dia kristaly fotsy, hygroscopic solid izay tena mety levona anaty rano sy alikaola. Matetika izy io dia mihaona amin'ny maha monohidrat.
Sodium perchlorate dia oxidizer mahery, na dia tsy dia ilaina amin'ny pyrotechnics toy ny sira potasioma aza izy noho ny hygroscopicity. Hihetsika amin'ny asidra mineraly mahery, toy ny asidra solifara, hamorona asidra perchloric.
Fampiasana: ampiasaina amin'ny famokarana perchlorate hafa amin'ny alàlan'ny dingan'ny famotehana roa.
1) perchlorate sodium, anhydrous
2) perchlorate sodium, monohidrat
Ny perchlorate sôdiôma dia oxidizer mahery. Tokony hotazomina hiala amin'ny akora biolojika sy ny agents mampihena mahery. Tsy toy ny chlorate, ny fifangaroan'ny perchlorate misy solifara dia somary marin-toerana.
Misy poizina antonony izy io, satria manelingelina ny fampiakarana ny iode any amin'ny fihary tiroida ny ankamaroany.
NaClO4 dia tokony tehirizina anaty tavoahangy mihidy mafy satria somary hygroscopic. Tokony hialana amin'ny etona misy asidra mahery izy io mba hisorohana ny fananganana asidra perchloric anhydrous, loza ateraky ny afo sy ny fipoahana. Tsy maintsy esorina amin'ny fitaovana mora mirehitra koa izy io.
Ny perchlorate sôdiôma dia tsy tokony hararaka amin'ny tatatra na atsipy amin'ny tontolo iainana. Tsy maintsy apetaka amin'ny sisiny mampihena ny NaCl aloha izy io.
Ny perchlorate sôdiôma dia azo ravana amin'ny vy metaly ambanin'ny hazavan'ny UV, amin'ny tsy fisian'ny rivotra.
Vovon-tsiranoka magnesium spherical magro